Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Ndị na-egwu bọọlụ Turkish Caglar Soyuncu hoodmụaka Akụkọ Ngwakọta Eziokwu Untold Biography
Anyị Caglar Soyuncu Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, nke a bụ akụkọ ihe mere eme nke ndị ọkachamara na Turkey. Anyị na-amalite site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na obodo Leicester. Iji mee ka ị detụ ụtọ ọdịdị nke Caglar Soyuncu's Bio, nke a bụ nchịkọta ihe atụ nke ndụ ya.
Ndụ na ịrị elu nke Caglar Soyuncu.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ ya pụrụ iche, dị mma n'anya agbachitere, onye na-adịghị atụ egwu ma dị ebube maka egwuregwu nke oge a. Agbanyeghị, ọ bụ naanị aka ole na ole n'ime ndị egwuregwu bọọlụ tụlere Caglar Soyuncu's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Caglar Soyuncu - Nzụlite Ezinụlọ na Ndụ Mbido:
A mụrụ Caglar Soyuncu na 23 nke ụbọchị nke May 1996 na ndị mụrụ ya Mr na Mrs Ömer Söyüncü n'obodo İzmir, Turkey. Mgbe a mụrụ ya, nne na nna ya, bụ ndị gbasoro omenala ezinụlọ Turkey hụrụ na ọ bụ onye kacha sie ike aha ederede ya na ntụpọ diacritic nke ndị egwuregwu bọọlụ bekee mara. Aha ahụ bụ- “Ağlar Söyüncü".
Ceglar Söyüncü sitere na Izmir, obodo Turkish mepere emepe (obodo nke atọ kachasị na Turkey) ozugbo Alaeze Ukwu Rom na-achịkwa n'okpuru ama ama ZIGARA EGO onye nwere obodo. Site na ntinye, obu ihe ekwesiri ikwu na obere Ceglar Söyüncü (nke di n’okpuru n’okpuru) nwere ike inwe ezi na ulo ya site na Akwa Onyenwe anyi nke Asia - ALEXANDER EKWU.
Caglar Soyuncu nwere ezinụlọ ya site na İzmir, obodo dị na ụsọ oké osimiri Aegean nke Turkey. Ebe E Si Nweta Foto: GoogleMaps na Instagram
N'ịbụ onye tolitere na ụlọ ezi na ụlọ ụlọ klas, Caglar Soyuncu nọrọ ọtụtụ afọ nwata na Menemen district nke İzmir n'akụkụ nne na nna ya na ndị ọzọ na ezinụlọ. A zụlitere ya n’ezinaụlọ nwere nnukwu nsọpụrụ maka okpukpe Alakụba na ọdịnala.
Caglar Soyuncu Biography Eziokwu - Mmụta na andlọ Ọrụ Buildup:
Na-etolite n'obodo ukwu Izmir, agụmakwụkwọ maka ụmụaka abụghị naanị maka ịmụ ihe mgbe ochie na ihe ndị ọzọ gbasara agha n'oge ọchịchị Rome na Ottoman. Maka obere Caglar, ọ bụ maka ịgba bọl. Ihe omume ntụrụndụ a kachasị amasị ya ghọrọ akụkụ nke ya, ọkachasị mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ.
Site na mkpali egwuregwu ahụ, Caglar ga-agba bọọlụ ụbọchị niile, ọkachasị n'oge ezumike n'enweghị ike ọgwụgwụ. N'oge na-adịghị anya, nwatakịrị ahụ pụrụ iche zụlitere mmasị n'ịgba bọọlụ ọrụ aka, mkpebi nke nne na nna ya kwadoro.
Mgbe ya na nne na nna ya na ndị nkuzi ụlọ akwụkwọ mechara nwee mkparịta ụka, Soyuncu na-achọkarị ịbụ onye onwe ya, ya na Menemen Belediyespor, ụlọ akwụkwọ egwuregwu mpaghara dị na Menemen nke İzmir. Mgbe ọ debanyere aha ya, ọ ga (foto dị n'okpuru) Apụrụ agha dị ka onye na - eti ihe na ọ bụghị onye na - agbachitere nke ụwa mechara mata na ọ ga - abụ.
Zute Caglar Soyuncu mgbe ọ banyere na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ mbụ ya.
Caglar Soyuncu Ndụ Ndụ Ndụ:
Mylọ akwụkwọ egwuregwu bọọlụ Menemen Belediyespor nyere Soyuncu ohere igosipụta onyinye ya n'ihu ndị na - ahụ maka ndị isi, ndị Scouts, ndị na - enye ọzụzụ na ndị nchịkwa. Maka ndị na-achọ mmasị, obi abụọ adịghị ya na ọ na-aga n'ụzọ ziri ezi. Dịka nwa ọ bụla ọzọ na ụlọ akwụkwọ mmuta, Soyuncu nweere anya kpọọ na Leaguezmir bọọlụ Njikọ- otu egwuregwu bọọlụ nke Izmir, obodo ya nke Turkey.
Mgbe afọ isii soro Menemen Belediyespor soro, Soyuncu n’afọ 2011 hụrụ nrọ ndị ya na ha Njikọ bọọlụ İzmir na-abịa. O nwere nyocha nke ọma na Bucaspor, klọb na-egwuri egwu na mpaghara bọọlụ bọọlụ nke obodo ya, Izmir. Na klọb ahụ, a tụfuru Caglar Soyuncu na-eto eto na etiti ma emesịa, etiti azụ nke ọ na-aga n'ihu ọbụladị dịka ọkachamara.
Caglar Soyuncu Biography - tozọ a ma ama:
Uzo nke igbatu ndi isi ala di ala iji bili: Maka ọtụtụ ndị na-eto eto Ndị egwuregwu bọọlụ bụ ndị setịpụrụ maka agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ (dịka. John Lundstram), thezọ kachasị mma iji mee ka ngụsị akwụkwọ pụta ma ọ bụ bụrụ ndị ndị egwuregwu bọọlụ matara ka ọ ga - agbadata na - eweda ha. N'ebe ahụ, a na-ejikwa nhọrọ nke ndị otu egwuregwu ike ma kwenyesikwa ike n ’ịkwụ ụgwọ ọ bụla.
Nke a ghọrọ atụmatụ zuru oke maka Caglar Soyuncu onye dara Gümüşorduspor, ndị otu egwuregwu amateur Turkish ebe a mesoro ya dịka eze, na-echekwa ụzọ ya na agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ. Mgbe agụmakwụkwọ Gümüşorduspor gụsịrị akwụkwọ agụmakwụkwọ, enwetara Söyüncü n'ime ndị otu otu Altınordu, otu klọb nke na-egwuri n'ọkwa nke abụọ nke otu egwuregwu bọọlụ Turkish. Nke a bụkwa klọb maara nke ọma maka ndị na-eto eto na -eme egwuregwu n'akụkụ ndị ọzọ nke Europe.
Ahmed Musa nwa akwukwo n'akwukwo nke oma
Caglar Soyuncu nwere naanị otu ozi mgbe ọ nọ na Altınordu- I egwu na mba ndị ọzọ.
Caglar Soyuncu Bio - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
N'oge oge 2016 / 2017, Caglar Soyuncu jere n'ụzọ Europe banye na klọb German SC Freiburg. Ọ bụ mkpebi o chere kacha mma nhọrọ maka ọrụ ya na mmụba ya. Soyuncu rutere ụlọ ọgbakọ ahụ n'oge kwesịrị ekwesị, oge SC Freiburg ka agbagoro agbagoro n'asọmpị egwuregwu elu German (Bundesliga).
Na SC Freiburg n'oge oge 2016 – 17, Caglar malitere iwere ụzọ obi ọjọọ na omume nke ịgbachitere, na-agbachitere ndị iro ọ bụla na-abịa. Ya diri mmeri nke meteoric wee bụrụ onye a ma ama n'otu oge, wee bụrụ otu n'ime ihe agbachitere agbachitere kachasị mma na egwuregwu German na Europe na nnukwu.
Caglar Soyuncu rịrị elu na ala German, bụrụ otu n'ime ndị na-agbachitere kacha mma na Bundesliga.
Mbili Caglar Suyuncu mere ka ọ banye n'ime ndị otu mba Turkey, mmepe nke hụrụ ya ka ya na Man City, Bayern Munich, AS Roma na Leicester jikọrọ ikpere maka mbinye aka ya. Ọ bụ Leicester mechara merie.
Na 9 August 2018, Söyüncü sonyeere Leicester, klọb na-achọ nhọrọ nke ịgbachitere ịgbaso ịkọ nkọ na-aga n'ihu ọdịnihu onye na-agbachitere kpakpando ha. Harry Maguire. Ọpụpụ nke Maguire hapụrụ ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ Leicester obi mgbawa na Caglar Soyuncu ghọrọ nwoke ahụ ịgwọ ndị obi ha tiwara etiwa, ihe mere nke mere ndị egwu bọọlụ Leicester na-arịọ; Magnye chọrọ Harry Maguire?.
Tupu oge 2019/2010, Caglar Soyuncu abụrụlarị onye egwu nzuzo nke Leicester. Nkwado ya na nchebe nyere ya otuto too Brendan Rodgers.
Caglar Soyuncu ghọrọ onye na-agbachitere ụwa na Premier League.
Ike nchekwa Soyuncu, ike ike, ịme egwuregwu na isi okwu rụrụ nnukwu ọrụ na igwe na-ebugharị Leicester iru ọkwa nke abụọ na ọkara nke mbụ nke oge mbụ 2019/2020.
Obi abụọ adịghị ya, ndị egwuregwu Leicester na anyị ndị egwuregwu bọọlụ na-abịa nso nke ịhụ ọzọ Carles Puyol na Mat Hummels (n'ime ime) na-eme ka ọ pụta ìhè n'inye anyị onyinye ụwa nke ọma n'ihu anyị anya. Onye Ukwu Çağlar Söyüncü bụ n'ezie otu n'ime ndị kachasị mma n'etiti usoro mmepụta nke ndị na-agbachitere etiti na-apụta na Europe. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Caglar Soyuncu Ọ Alụọla? … O nwere Nwanyị na Nwanyị Ọ ga-alụ?
Site na mmụba ya na ịbụ onye a ma ama ma nweta obi ndị egwuregwu Premier, ọtụtụ ndị egwuregwu amakpuwo amata na Caslar Soyuncu nwere enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye. EE! Onweghi agọnarị eziokwu nke ya mara mma tinyere ụdị egwu ọ na-egwu agaghị etinye ya n'elu ndepụta ndepụta enyi nwoke ọ bụla.
N'ịhụ ka ọ na-eto eto, ọtụtụ ndị Fans jụrụ- isnye bụ enyi nwanyị Caglar Soyuncu?.
Mgbe ọtụtụ nnyocha mechara ịntanetị, ọ na-egosi Çağlar Söyüncü etinyewo mgbalị siri ike ịhapụ ikpughe enyi ya nwanyị ma ọ bụ nwunye (na bụ ọ bụrụ na ọ nọworị na nzuzo nzuzo) n'oge edere.
N’aka nke ọzọ, anyị maara mgbe ụfọdụ ka enwere ike ịgbaghara agbachapụ asọmpi praịmarị ọkachasị mgbe ọ na-adịghị ịgwakọta egwuregwu ahụ na ihe metụtara mmekọrịta. Mgbe sndị na-eme egwuregwu ome hụrụ mbelata ha n’ihi ihe dịka afọ ma ọ bụ otu / usoro ọhụụ, ihe ndị ọzọ na-ada ada nwere ike bụrụ ndị na-abụghị ndị ọzọ karịa mmekọrịta ọjọọ. Maka nke a, ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ na-ahọrọ ka ha ghara inwe mmekọrịta ma ọ bụ igosi ndị enyi ha nwanyị n'ọnọdụ ụfọdụ dị mkpa n'ọrụ ha.
Ndụ nke Onwe Onye Caglar Soyuncu:
Tomata Çağlar Söyüncü Ndụ nke onwe gị ga - enyere gị aka ịghọta ụdị onye ọ bụ, zere mmadụ ị na - ahụ na ọ na - ahụkarị ihe egwuregwu. Nmalite, ọ bụ nwoke dị jụụ, onye hụrụ igosi obi umeala, na-aerụrị ọ andụ ma na-amụmụ ọnụ ọchị (ọ na-abụkarịghị akara egwuregwu bọọlụ nke oge a).
Caglar Soyuncu Ndụ Nke Onwe gị pụọ na Pitch.
Ọzọkwa na ndụ onwe ya, Soyuncu bụ onye na-apụ apụ ma nwee omume enyi. Fromhapụ ịgba bọl n'oge ezumike, ị nwere ike ịchọta ya na ụlọ ọrụ dị iche iche ndị mmadụ iche. Soyuncu na ndị nọ na klas niile na - emekọrịta ihe, ụfọdụ ndị ọ na - enyere aka n'ụzọ ego na - enweghị ihe ọ bụla.
Caglar Soyuncu na-ebi ndụ dị umeala n'obi- na-emefu ndị enyi mgbe ha na-apụ ha.
Eziokwu Caglar Soyuncu si ebi ndụ:
N'ihe banyere ndụ Caglar Soyuncu, ọ bụ onye na-ejide nguzozi n'etiti itinye ego na ịchekwa ego. Obi abụọ adịghị ya, ụgbụ ya ruru 12.5 Nde Euro (10.8 Nde Pound) na ọnụ ahịa ahịa nke 18 Nde Euro (15.5 Nde Pound) ga-eme ka ọ bụrụ nde mmadụ nde mmadụ. Bụ nde mmadụ agbanyeghị na ọ gafere n'ụdị ndụ mara mma nke aka jupụtara n'ụgbọ ala dị oke ọnụ dị ka a hụrụ n'okpuru.
Amaghi Caglar Soyuncu Web site na aka juputara na ugboala di oke onu n'oge edere.
Na nchịkọta nke ndụ ya, anyị nwere ike kwubi na Caglar Soyuncu bụ ọgwụ iji gbochie obibi ndụ, (opekempe) n'oge edere.
Ndụ Caglar Soyuncu Ezinụlọ:
Ezinụlọ Caglar Soyuncu n'oge edere bie ndụ na nzuzo dị ala na Turkey n'agbanyeghị paparazzi nọ na prowl na ọtụtụ ụzọ iji jikọọ na mgbasa ozi mmekọrịta.
Inggagharị na mgbasa ozi mmekọrịta ya, Caglar n'oge edeghị ihe ọ bụla banyere ndị mụrụ ya ma ọ bụ ndị ezinụlọ ya na profaịlụ ya. Ọ bụ ezie na njirimara ha ka bụ ihe nzuzo, onye kacha nọrọ ezinụlọ nso ka bụ ezigbo enyi ya na onye otu egwuregwu mba Chenk Tosun.
Ezigbo ezinụlọ Caglar Soyuncu bụ Cenk Tosun, ebe ọ na-echebe ndị isi nọ na anya ọha.
N'agbanyeghị na-agbasi mbọ ike iji zere ọnọdụ ọ bụla na ndụ nzuzo, enwere na Caglar, mmetụta dịịrị nwanne ya nwoke (nwanne) ya, nwanne ya na ndị ikwu ya.
Caglar Soyuncu Eziokwu Eziokwu:
Mweghachi nke Onye Na - eme Ihe Ike n’agha nye eze mbụ ya nke chịburu obodo ya: N'otu oge ma ọ bụ nke ọzọ, anyị na-adaba onye anyị na-amaghị mgbe ụfọdụ na-agwa anyị na anyị dị ka onye ha ma, nri? Ọ dị mma, anyị ahọrọla nke Çağlar Söyüncü na Alexander Onye Ukwu. Be bụ onye ikpe!
Ọdịdị dị ịtụnanya dị n'etiti Caglar Soyuncu na Alexander the Great.
Egwuregwu Egwuregwu Ya: N'ịbụ ndị egwuregwu a na-agbasokarị na ụwa dum, o doro anya na ndị egwuregwu bọọlụ na-abụ ihe mkpali nye ọtụtụ nde ndị egwuregwu ha na-elegara ha anya, na-ewere ha dị ka arụsị. Na 2016, Caglar Soyuncu kwuru na arụsị ya abụọ bụ onye na-agbachitere Spanish Carles Puyol na German mba Mats Hummels.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Caglar Soyuncu Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Demarai Gray Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ